Ungawagwema kanjani amadoda e-cellulite | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 07/11/2021 13:13 | Ukunakekelwa komuntu siqu, Kufanelekile, Ukudla okunomsoco, Ezempilo
Namadoda futhi bahlushwa cellulite. Awukho umzimba ongamelana namafutha asabekayo asendaweni, abonakala ngokumangala emadodeni azacile. Uma ungomunye walabo bantu abanomkhuba wokudala i-cellulite, lapha sizokunikeza amathiphu angcono kakhulu ukugwema lamafutha.
Kunamaphesenti aphansi amadoda aphethwe cellulite jikelele emzimbeni wabo. Bangu-10% kuphela abahlushwa yiwo uma kuqhathaniswa nabesifazane kanye nasemzimbeni wonke wabo. Futhi ivela emilenzeni, esiswini, ezinqeni nasezingalweni futhi kungase kube ngenxa yenkinga yama-hormone, indlela yokuphila engenampilo ehlanganisa ukudla okungenamsoco.
1 Injani i-cellulite emadodeni?
2 Indlela yokuvimbela i-cellulite
3 Yikuphi ukudla okufanelekile?
4 Ezemidlalo kanye nomsebenzi kuyizimbangi ezihamba phambili
5 Ezinye izinhlobo zokwelapha ukugwema cellulite
Injani i-cellulite emadodeni?
I-Cellulite Kuyinto a ukunqwabelana kwamafutha ehlala ezingxenyeni ezijulile zesikhumba. Ngokuvamile kwenzeka ngenxa yokusetshenziswa ngokweqile kwamafutha noma ngenxa ikhalori evuthayo evuthayo eziguqulwa zibe amafutha. Abesilisa bavamise ukubuthelela ezindaweni ezifana nokhalo nesisu.
Ungahlali nesici sokuthi amadoda awanayo i-cellulite, ngoba abaningi banayo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi basusa amafutha ajabule kangcono kakhulu. Abesifazane banama-estrogen amaningi kanti amadoda mancane kakhulu. Lesi sici sibasiza ukuthi bangaqoqi amafutha ezindaweni ezithile zomzimba wabo, njengasekugcineni amathanga nezinqe. Ngaphezu kwalokho, i-testosterone ephezulu emadodeni isiza ukuncibilikisa lokho kudle amafutha kangcono kakhulu.
Ukwakheka noma ukwakheka kwesikhumba zamadoda zihlukile. Izingqimba ezijulile zesikhumba zakhiwe ngamakhamera aqondile futhi yingakho bevame ukuqongelela amafutha kangcono kakhulu. Amadoda analawa makamelo ahlelwe ngamayunithi amancane futhi ngokudayagonali, ngakho amafutha asakazwa kakhulu.
Indlela yokuvimbela i-cellulite
Amadoda kanye nabesifazane bangaba namaqhinga abo amancane okuvimbela i-cellulite. Ekugcineni, i-morphology esuka emzimbeni owodwa iye komunye ayihlukile kakhulu, kodwa kufanele sengeze ukuthi baneziningi. izindlela ezingcono kakhulu zokuvimbela nokulwa namafutha.
Okokuqala nje ukuzama ukunakekela Ukudla okunempilo. Utshwala nokubhema kuyinto yokuqala okufanele ilahlwe njengomkhuba. Amafutha, ikakhulukazi agcwele kanye noshukela kumele zisuswe ekudleni.
Ukucindezeleka kungesinye isici lokho kubangela ukuthi uhlelo lwethu lokusebenza luguqulwe. Izinguquko ezingokwengqondo zenza umzimba ugcine amafutha ezimweni eziningi, okwenza kube yindawo.
Yikuphi ukudla okufanelekile?
Nakuba sikubukezile lokho amafutha amaningi nama-carbohydrate favour cellulite, kukhona ukudla okusiza ukwenza okuphambene nalokho. Izithelo, imifino kanye nemifino ilungile ukuze ungafaki amafutha. Kodwa ezinye ezifana ne-apula, u-anyanisi, ithanga, uphayinaphu noma i-asparagus zinesodium encane futhi zicebile nge-potassium, zilungele ukusetshenziswa. ukusiza ekuqedeni uketshezi.
Ukudla okucebile nge-fiber bathanda ukuhamba kwamathumbu futhi bahlobene nokuvimbela i-cellulite. Okusanhlamvu okuphelele, imifino nezithelo kucebile kule ngxenye. Zonke ezisawolintshi Okucebile ngovithamini C nokudla okunothe ngovithamini E nakho kubalulekile ukuvimbela amafutha.
Kufanele ugcine umzimba ugcwele amanzi amaningiLokhu kusho ukuphuza amalitha amabili amanzi ngosuku. Phakathi kwalezi ziphuzo ungafaka amajusi emvelo noma ama-infusions njengetiye eliluhlaza, i-horsetail noma i-sage.
Ezemidlalo kanye nomsebenzi kuyizimbangi ezihamba phambili
Kufanele wenze kusebenze Ngoba indlela yokuphila engenzi lutho iwumsizi ongcono kakhulu wokubukeka kwe-cellulite. Ezemidlalo zinhle ngoba ziyasiza sebenzisa ukujikeleza kwegazi futhi i-oxygen wonke umzimba. Ukuzivocavoca okungcono kakhulu okugcina isisindo somzimba singekho ukugijima, ama-aerobics, ukubhukuda, nokuhamba ngebhayisikili.
Uma uthanda high umfutho umzimba ungazama ezihlala isikhathi eside ezixutshwe nomfutho we-aerobic omaphakathi. Kufanele kube izikhathi lapho zixutshwa khona Ukujima kwemizuzu engama-20 yokuqina okuphezulu nokuthambile ukuze ukwazi ukululama. I-Sprint, uchungechunge lwama-squats, amaphaphu, ukugxuma okuningi, uchungechunge lokugwedla namabhayisikili.
Ezinye izinhlobo zokwelapha ukugwema cellulite
Kukhona amadoda asebenzisa i-electrostimulation yemisipha ukuze uhlale ufanelekile. Kuhlanganisa ukusebenzisa amandla kagesi ukuze kubangele ukufinyela kwemisipha. Kuwumuzwa ofanayo lapho ubuchopho buthumela ama-impulses ohlelweni lwezinzwa oluphakathi ukulawula ukunyakaza kwemisipha.
Amamasaji afanelekile ukwenza kusebenze ukujikeleza nokususa wonke lawo mafutha asendaweni. Kukhona okhilimu be-anti-cellulite abangafakwa kulolu hlobo lokubhucunga. Ngakolunye uhlangothi, kukhona futhi i-massage ye-lymphatic, i-pressotherapy ne-mesotherapy. Zonke zisiza ukukhipha uketshezi olugciniwe emzimbeni.
Lezi ezinye zezindlela okufanele uzilandele uma ufuna ukuvimbela i-cellulite. Ungathathi ama-calories angaphezu kwalokho onganikela ngawo emzimbeni wakho Futhi ukuzivocavoca kuyisisekelo sokugcina umzimba ongenawo amafutha. Ungakhohlwa ukuthi ukudla okunempilo, okunamafutha amancane nakho kuzosiza kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Ukudla okunomsoco » Ungawagwema kanjani amadoda e-cellulite